"Macril": မှိုမှိုမုန့် | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
« Macril »: မှိုမှိုမုန့်
စတိုင်လ်အမျိုးသားများ | | အချိန်အား, ကျန်းမာခြင်း
ကံမကောင်းစွာပဲ မည်သူ့ကိုမျှသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိမှိုများရှိခြင်းမှလုံခြုံမှုမရှိပါ ပြီးတော့မင်းကိုမသိဘဲဘယ်နေရာမဆိုအချိန်မရွေး fuck လုပ်နိုင်တယ်။ ကောင်းမွန်သောဘက်တွင်မှိုများသည်မည်မျှခက်ခဲသည်ဖြစ်စေ၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်မီမကုသပါက၎င်းတို့ကိုရှေ့တန်း တင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာမှလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက်ရာနှင့်ချီသောကုစားနည်းများရှိသည်။
အဆိုပါတစ်ခုမှာ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သော antifungal creams သည် Macril ဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယား၊ ဖန်းဂတ်စ်သို့မဟုတ်ရောနှောထားသောကူးစက်ရောဂါများကြောင့်ရှုပ်ထွေးစေသောရောင်ရမ်းအရေပြားရောဂါများအတွက်ရည်ရွယ်သည် - ဒုတိယဘက်တီးရီးယားသို့မဟုတ်မှိုများကူးစက်သည့်အရေပြားရောဂါ၊ ဤမုန့်၏သေတ္တာထဲတွင်တွေ့ရသောလက်ကမ်းစာစောင်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
သင်ယခုဖတ်သောဤရောဂါများအားလုံးသည်သင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ခြင်းမရှိကြပါ။ သို့သော် Macril ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနားလည်ပါသည်။ အမျိုးသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်တံတွင်ခံစားရသောယားယံခြင်းသို့မဟုတ်နီခြင်းများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မှိုရောဂါခံစားနေရသောအခြားနေရာများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
your သင်၏လိင်တံအရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာရှိပါသလား။ လိင်တံသေးသေးလေးရှိခြင်းသည်စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ဤနေရာမှ Penis Master စာအုပ်ကိုကူးယူပါ အတွက်အကောင်းဆုံးလှည့်ကွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရန်အတွက် အန္တရာယ်ကင်းစွာသင်၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်.
ကသာရိုးရှင်းတဲ့မုန့်, ​​ဖြစ်သော်လည်း မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲအလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြproblemနာကိုဆရာ ၀ န်မှဆရာ ၀ န်မလုပ်ဘဲမလုပ်သင့်ပါ။ ဆရာ ၀ န်ထံသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်မှိုများရှိသည်နှင့်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်တံတွင်ရှိနေသည်ဟုပြောရန်အလွန်ရှက်စရာကောင်းသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်သည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အရာများကိုသေချာပေါက်မြင်တွေ့ရပြီးဖြစ်သောကြောင့်စိတ်မပူပါနှင့်။
ဆရာဝန်များအနေဖြင့်၎င်းကိစ္စအတွက်ယင်းကိုသတ်မှတ်ရန်မှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည် ခန်ဓာကိုယ်, လိင်တံ၏ယားယံခြင်းနှင့်နီခြင်းရောဂါဖြစ်ပြီးသူတို့ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်လူများစွာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သို့သော်ဤဆီမွှေးသာသာသင့်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးညွှန်းအရလျှောက်ထားရမည်။
2 Macril ကိုဘယ်မှာဝယ်လို့ရပါသလဲ
ကုထုံးလှုပ်ရှားမှု - လိမ်းဆေးအသုံးပြုရန်အတွက်ဘက်တီးရီးယား၊ ဖန်းဂတ်စ်၊
FOR ညွှန်ပြ: ဘက်တီးရီးယား၊ ဖန်းဂတ်စ်သို့မဟုတ်ရောစပ်ထားသောရောဂါပိုးများကြောင့်ရှုပ်ထွေးသောရောင်ရမ်းအရေပြားရောဂါများ။
ဖွဲ့စည်းပုံ - ၁၀၀ ဂရမ်၌ ၁၀၀ ဂရမ်ပါဝင်သည်။ Betamethasone 100-Valerate 17 g, Gentamicin Base (Sulfate as) 0.10 g, Miconazole Nitrate 0.10 g ။ excipients
တင်ပြချက်များ - 20 ဂရမ်နှင့်အတူကွန်တိန်နာ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Macril ကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်ကပြသခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းသင်ကဆရာ ၀ န်သို့မသွားရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ ၎င်းကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စတိုးများစွာမှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်အတော်လေးတတ်နိုင်သည်၊ သို့သော်စျေးကြီးလျှင်၎င်းသည်မှိုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းယားယံခြင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်ကိုမြင်ရန်၎င်းသည်ပေးဆပ်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
နောက်ထပ်တစ်ခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်မှာသင်သည် Macril ကိုလွတ်လပ်စွာမဝယ်ပါသင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုအသုံးချသည်ထက်များစွာနည်းသော်လည်း၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » « Macril »: မှိုမှိုမုန့်
100 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဒီဟာနည်းနည်းစျေးကြီးတယ်။ ဒေါ်လာ ၃၀.၉၀ (ARG)
မေးခွန်းကဒါကိုထိပ်ဖျားထားလို့ရလား၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြtheနာကငါကအက်တမ်ကိုစုတ်ပြဲနေသလိုပဲနာကျင်နေလို့အသားတင်ကိုမလျှော့နိုင်လို့ပါ။ S
Andres Felipe ဟုသူကပြောသည်
ငါခင်ဗျားကို Man 1 Oil Man ဒါမှမဟုတ် INTIMA ငါအကြံပေးခဲ့တယ်။ ငါကသူတို့လိင်တံကိုအာဟာရပေးပြီးကလေးအရေပြားပေးဖို့အရမ်းကောင်းတယ်။ ကိုလံဘီယာတွင်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကရောင်းချသည်။ ကျွန်တော့်ကိုအမြဲတမ်းပြanyနာမရှိဘဲ ၁၀၀% မူလပြmeနာမရှိဘဲအမြဲတမ်းပို့ပေးပါတယ်။ သူတို့ကအောက်ပါအီးမေးလ်တွင်တွေ့: felpp@hotmail.com ဒါမှမဟုတ်ငါထင် cel 3102860240
Andres Felipe အားပြန်ကြားပါ
Oscarosvaldo Alvarez@yahoo.com.ar ဟုသူကပြောသည်
Oscarosvaldo Alvarez@yahoo.com.ar သို့စာပြန်ပါ
Juan Perez ဟုသူကပြောသည်
ယနေ့ 17-05-2017 အိုင်တီအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀၄.၁၁ ဖြစ်ပါသည်။ ၇ နှစ်အတွင်းတွင်ဖောင်းပွမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဟယ်လိုပါပလော၊ ငါနဲ့တော်တော်ဆင်တူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမုန့်ကကျွန်မကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်။ ရေမွှေးမရှိဘဲကြားနေဆပ်ပြာဖြင့်ဆေးကြောခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။
hahaha ဖာနန်ဒို, ငါကယနေ့ $ 30 ခဲ့ hahaha အလိုရှိ၏ !! $ 600, ဒါကြောင့်ယခု!
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောမုန့်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၁၈ pesos ဖြင့်ဝယ်ခဲ့သည်။ (arg)
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီး၊ ဤမုန့်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိစေလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဝမ်းဗိုက်၌ယားယံခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Lucas ayosa ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ Marina, လိမ်းရန်အသုံးပြုရန်အတွက်မှို၊ ပacterိဇီဝဆေးနှင့် anti-inflammatory များအတွက် MACRILes မုန့်ကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၎င်းအကြောင်းကြောင့်၎င်းခန္ဓာကိုယ်သည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်အထူးအကြံပြုလိုသည်။ သင်၏သားဖွားဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အဖြေသည်သင့်အားကူညီပေးပြီးကျွန်ုပ်၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်တွင်အလားတူအရာတစ်ခုရှိပြီးသူတို့အားသူမအား hypoglos ပေးခဲ့သည်။ အနမ်း
lucas ayosa အားပြန်ပြောပါ
အလွန်ကောင်းတဲ့ဆေးတစ်လက်။ ။ ငါ့ကိုမှိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကုသပေးခဲ့လို့အမြဲတမ်းသံသယရှိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ခွင့်လွှတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ glans များတွင်ဝက်ခြံအချို့ ရှိ၍ ဤမုန့်ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါက၎င်းဝက်ခြံများနှင့် (၄) လခန့်ကြာအောင်နေခဲ့ပြီး၎င်းတို့ပျောက်ကွယ်သွားသောအရာဘာမှမရှိပါ။ ငါ miconazole ကိုလည်း ketoconazole ကိုလည်းသုံးပြီးလုပ်နိုင်သည်။ ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါကခင်ဗျားအသုံးပြုတဲ့ဆပ်ပြာကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါ့မှာအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဥပမာငါ rexone ဝယ်လိုက်တိုင်း (ဆပ်ပြာကိုပြောင်းပါ။ ဒါမျိုးမဖြစ်ရင်မှိုဒါမှမဟုတ်တစ်ခြားအရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားပါ .. )
ငါ $3ဝယ်လိုက်တယ်
maquril qurema ကို ၄ လအရွယ်ကလေးငယ်ကိုရရှိနိုင်ပါသလား။
ကျွန်တော့်ကလေးမှာအနှီးအနီရှိပြီး ၄ လရှိပါပြီ။ ငါ macril cream သုံးလို့ရမလား။
အနှီးအဖုကြောင့် Macril ကိုကျွန်ုပ်ကလေးအတွက်သတ်မှတ်သည်။ သင့်ရဲ့ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကပြသခဲ့သည်, ယခုငါစမ်းသပ်မှုလုပ်ချင်တယ်
ကျေးဇူးပြု၍ Lima-Peru ရှိမည်သည့်ဆေးဆိုင်များကို macril cream ကိုစျေးကွက်သို့ရောင်းချသည်ကိုသူတို့သိရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ဆေးဆိုင်များတွင်၎င်းတို့တွင်မရှိကြောင်း ... ထိုအချက်သည်အရေးပေါ်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကဲသာဘုရငျ gutierrez ဟုသူကပြောသည်
ဘာထွက်လာလဲ ?? ဒါထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မလက်ပေါ်မှာရေပူပြင်းလာပြီးအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကသူတို့က Ongos တွေလို့ပြောတယ်
cesar gutierrez အားပြန်ကြားပါ
ငါ့လက်မောင်းမှာအစက်အပြောက်တွေရှိတယ်၊ သူတို့ကမှိုတွေလို့ငါ့ကိုပြောတယ်။ ketoconazole, terbinafine နဲ့ငါ့အတွက်ဘာမှမအလုပ်လုပ်ဘူးငါဒီမုန့်ကိုဝယ်တော့မယ်။ ရလဒ်ကောင်းတွေရမယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။
ငါသိချင်တယ် .. ငါ့ဆရာဝန်ကဘာကြောင့်ငါ့ကိုထောက်ခံတာလဲ။
ငါအင်္ဂလန်မှာနေပေမယ့်သင်ဒီမှာ Macril ကိုမဝယ်နိုင်ဘူး သင်အွန်လိုင်း ၀ ယ်နိုင်သည်ဆိုပါကမည်သူသိသနည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ နေကောင်းလားယောက်ျားလေးများ၊ ငါဟာများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆေးမသောက်ဘူး၊ ELOCOM လို့ခေါ်တဲ့ခရင်မ်ကိုသူတို့ဖွဲ့စည်းတာက mometasone ဖြစ်တယ်၊ အဲဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကအရေပြားမှာပျက်စီးလွယ်တဲ့တခြား corticosteroids တွေနဲ့မတူဘူး။ SUPER !!!! MACRIL လို့ခေါ်တဲ့ဒီဆေးအကြောင်းထပ်မံလေ့လာကြည့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ သင်ဘာတွေလုပ်နေပြီ၊ ဘယ်လိုလက္ခဏာများ၊
ဟဲလိုငါ Guaton toe ထဲမှာမှိုရှိတယ်ငါသုံးပတ်လောက်ကြာအောင်ကုသပြီးတဲ့နောက်မှသူကပantibိဇီဝဆေးကိုသောက်ခဲ့တယ်။ သူကသူကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်ဆီသွားတယ်။ ဘာမှမရှိဘူး။ ခြေထောက်မှာခြေထောက်မှာကပ်နေတယ်။ ငါလည်းလက်မှာရှိတယ်။ ငါယူနိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုလိုတယ်၊ ငါချီလီမှာ
သငျသညျတက်ဘလက် antifungal ယူရှိသည်
အတိအကျ ... အကယ်၍ ၎င်းသည်မှိုဖြစ်ပါကပantibိဇီဝဆေးသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကုသမှုသည်ပါးစပ်နှင့်ပါးစပ်ဖြင့်ဖြစ်သင့်သည်
အကယ်၍ သင့်တွင်၎င်းကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုထက်ပိုသောနေရာတွင်ထားရှိပါက၊ သင့်ကို fluconazole 150mg ကိုသောက်ရန်အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံတွင်မည်မျှသောက်ရမည်၊ မှိုအမျိုးမျိုးအတွက်မည်မျှကြာမည်ကိုငါအကြံပြုသည်။
ထိုအရူးများအားလုံးအတွက်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်အရေပြားအထူးကုဆရာ ၀ န်ကသင့်ကို၎င်းအတွက်ညွှန်ကြားထားလျှင်၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလျှင်သူတို့ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာမေးနေကြရတာလဲမသိဘူး။ S.
Juan P. သို့ပြန်သွားရန်
anoni ... ဟုသူကပြောသည်
anoni သို့ပြန်သွားပါ ...
ကောင်းသောညနေခင်းငါ macril ကိုဒေါသထွက်နေတဲ့အမြီးရှိတဲ့ငါ့ကလေးအတွက်သုံးလို့ရမလားသိချင်တယ်။ သူကနှစ်လပဲ။
Hello Javier, macril ကမင်းကိုပိုပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ငါသည်ဤရောဂါများအတွက်ကုသမှုပေးသော hypoglos cream ကိုသင်ဝယ်ယူရန်အကြံပေးသည်။ ကျွန်ုပ်၏သုံးလအရွယ်သမီးက၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ကလေးအထူးကုဆရာဝန်၏အကြံပြုချက်အရ၎င်းကို ၀ ယ်ပါ။ သင်ကအနှီးပြောင်းသည့်အခါတိုင်းအလွယ်တကူအသုံးပြုသင့်သည်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိသောဒေသကိုကောင်းစွာဆေးကြောပြီးလျှင်၊ ၎င်းကိုဝတ်ဆင်ပါ၊ အေးဆေးငြိမ်သက်စွာနေပါ၊ ထိုမုန့်သည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ဆေးညွှန်းများရောင်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်၊ ဆေးဆိုင်များတွင်ရောင်းချကြသည်။ သူတို့ကနာကျင်မှုအဘို့ဖြစ်၏သိလို့။ ငါ bb jonson ဆီအနည်းငယ်နဲ့ရောပြီးဒါကိုကောင်းစွာပျံ့နှံ့သွားပြီး pee နဲ့ poop တွေကပိုပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာမလုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ ဝယ်ယူတာကအန္တရာယ်ကင်းတယ်။ သင့်ကလေးအထူးကုကိုမေးမြန်းပါ။
သူဟာသူဟာ DERMATOLOGIST အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်တယ်လို့ပြောသူလူကြိုက်မများပါဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ကျွန်တော့်ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါဆက်လက်ပြီးကုသမှုခံယူခြင်းနှင့်ငါ့မွေးချင်းနှင့်ချောင်ဖွန်ဂျီ (မက္ကလိ) တို့ဘာကြောင့်ဒီကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရနေရတာလဲ !! ARG ။
ကလေးများနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်သတိထားပါ။ corticosteroids အန္တရာယ်များကိုပြန်လည်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအလွန်မြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်ရှိသည်။ အကျိုးကျေးဇူးပိုကြီးသည်ဆိုပါက၎င်းတို့ကိုသာအကြံပြုပါသည်။ သူတို့ကနောက်ဆုံး option ကို !!!
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကကျွန်ုပ်၏မျက်နှာနှင့်နှုတ်ခမ်းများတွင်မှိုများရှိသည်ဟုသင်ပြောပါသည်။ ငါအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီးထံသို့သွား။ သူသည်ငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်သောမုန့်အကြံပြုခဲ့သည်3လအကြာငါအခြားအထူးကုနှင့်တိုင်ပင်သူ MACRIL အကြံပြုခဲ့သည်, အမှန်တရားကငါ့ကိုအလွန်ကောင်းသောရလဒ်များကိုပေးသောဖြစ်ပါတယ် .. ! ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အတွက်အရမ်းကိုတင်စားလို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တာကငါ့အတွက်သိပ်မကောင်းဘူးလို့ခံစားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုသင်ရနိုင်တဲ့လူမျိုးစုံအတွက်အကြံပေးတယ်၊ အခုလိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းမှာအမှန်တရားက ငါမသိဘူး ... ငါမသိဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုပြောပြဖို့ငါမစွန့်စားဘူး။ ခင်ဗျားမျှော်လင့်ပါတယ်
ငါ့မှာတစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးငယ်လေးကို glans တွေပေါ်မှာတင်ထားပြီးသူ့ဆရာဝန်ကကျွန်တော့်ကိုအကြံပေးတယ်၊ အဲဒါအရမ်းကောင်းတယ်
မင်္ဂလာပါ။ Glan ၏အနီရောင်နှင့်ယားယံခြင်းအတွက် Macril ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
macril ရန် ဟုသူကပြောသည်
ဤ Cream သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံတွင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ခြေထောက်တွင်ရယ်စရာမရှိခဲ့ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀ လအရွယ်ကလေးငယ်အတွက်ဤအလုပ်သည်ဟုတ်မဟုတ်သိလိုခဲ့သည်
maria pamela အားပြန်ကြားပါ
မိန်းမအင်္ဂါဇာတ် myososis အတွက်အသုံးဝင်ပါသလား။
ဟယ်လို, ဒီ CREAM ကို FUNGI အတွက်အသုံးပြုပါသလား။
ငါ့ယောက်ျားရည်းနဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ငါ့ယောနိ၏အထက်နှုတ်ခမ်းများနာကျင်လာပြီးငါဖြတ်တောက်ခြင်းအချို့ရှိသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ငါ macril အလုပ်လုပ်တယ်သို့မဟုတ်အခြားအဘယ်သို့သောမုန့်သင်အကြံပြုသလဲသိလိုပါတယ်?
ငါသည်သင်တို့ကို creampie ပေးပါ
ဂျိုလာ Melo ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏လိင်တံ၌မှိုများရှိသည်။ သို့သော်ပြောသော macril သည်ကောင်း၏။ ကိုလံဘီယာတွင်မရရှိသောအခြားဟန်တူနန်တူကိုဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူရရှိသည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
jonas melo အားပြန်ကြားပါ
ငါ့လိင်တံတွင်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုကျင့်ခြင်း၊ ငါခြောက်သွေ့ပြီးပူလောင်ခြင်း၊ ဆင်းရဲသောသူကိုပစ်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်းငါ၌ရှိသည့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ငါ ပြန်၍ မရနိုင်။ ချင်တယ် ...
အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအရာမှာမင်းမှာ eceirichia coli ရှိတယ်၊ fecal ကိစ္စနှင့်ဤလိင်မှုကိစ္စတွင်သင်၏လိင်တံတွင်နေထိုင်သော“ vichito” ဖြစ်ပြီး၊ နောက်မှမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ (အကယ်၍ ဖြစ်ခဲ့ရင်)၊ သင်၏လိင်တံကိုယခင်ကကူးစက်ခြင်းဖြင့်သင်ချက်ချင်းကူးစက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်နှင့်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုဘေးကင်းစွာကိုင်တွယ်ပါက၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်သင်သည်ကွန်ဒုံးကို ၀ တ်ရမည်။ သို့မှသာသင်သည်အေအိုင်ဒီအက် (စ်) ကဲ့သို့သောအခြားရောဂါများကိုလည်းရှောင်ရှားသည်။ ရှည်လျားသောအချိန်ကာလကသင့်အားနှလုံးမှခန္ဒာများ၊ အူလမ်းကြောင်းများနှင့်ရောဂါများကိုရောဂါပိုးကူးစက်စေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်ကိုမယုံကြည်ပါက။ ငါသည်သင်တို့ကို 1 °ထောက်ခံချက်ဆရာဝန်တစ် ဦး ကိုသွား,2°) CONDON BOLUDO အပေါ်ထား !!!, နှင့်3°) မီတာကိုရပ်ပါ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုအကာအကွယ်မပါဘဲသင်ဘာမှမသွားဘူး ... အကောင်းဆုံး။ သင့်အားဖြစ်ပျက် PENIS PENIS IS သူတို့ကသင့်ကိုထားပါနှင့်အခြား JI JI CONTAGED IS !!
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရှောင်ရှားရန် Ortho အားဖြင့်ယူ !!! နှင့်မြည်းတန်းစီနှင့်အတူသင်ကချိုးဖောက်သောကြောင့်သင်မနိုင်
သူတို့ချဲ့ကားပြောဆိုမှုများဖြစ်ကြသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ဤမေးခွန်းကိုအချိန်များစွာကုန်လွန်သွားသော်လည်းကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်တွင်စအိုလိင်သည်“ မသင့်လျော်သော” ကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်များစွာသောလူတို့အတွက်အလွန်ရှင်သန်နိုင်သောနှင့်သာယာသောလိင်ဆက်ဆံမှုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိင်တံဝင်သောစအိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးရှိဘက်တီးရီးယားများနှင့်လိင်တံနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုပါ၊ မိန်းမအားမထိခိုက်စေရန်ချောဆီကိုအသုံးပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စအိုသည်ယောနိကဲ့သို့သောစအိုဖြင့်မပျံ့နှံ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ areasရိယာနှစ်ခုလုံး (စအိုနှင့်လိင်အင်္ဂါ) နှစ်ခုလုံးတွင်တူညီသောကွန်ဒုံးကိုမသုံးပါနှင့်။ အကယ်၍ သင်သည်စအိုလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်အမျိုးသမီး၏လိင်တံကိုသူမ၏လိင်အင်္ဂါကိုလိင်အင်္ဂါထဲထည့်လိုက်လျှင်၎င်းသည်ထိုဘက်တီးရီးယားနှင့်အတူရောဂါကူးစက်နိုင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီအရာတွေဟာမင်းလိုလူတွေလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်။ သင်အောင်မြင်ပြီးပြီဆိုရင်သင့်ရဲ့လိင်တံဟာဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Pepe Mujica ဟုသူကပြောသည်
လွယ်ကူစွာမနေပါနှင့်၊ သူတို့၏လိင်တံကိုခြစ်ရာချခြင်း၊ သူတို့ကကြောင်တစ်ကောင်ကိုတစ်နေ့ကြိမ်နှင့် voila ထိုးနှက်ခြင်း!
Pepe Mujica အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ခြေထောက်တွင်ခြေချောင်းများနှင့်ခြေချောင်းများယားယံနေပါသည်။ အလွန်ယားပါသည်။ အနီရောင်အစက်အပြောက်များရှိတယ်။ မှိုလားဆိုတာမသေချာပါဘူး။ ဘာကိုအသုံးပြုသင့်သလဲဆိုတာပြောပြနိုင်မလား။
deralbine, miconazole နိုက်ထရိတ်
ငါ macril ကိုငါ့လျှာပေါ်မှာထည့်နိုင်သလားသိချင်တယ်။ ငါ့လျှာပေါ်မှာမှိုရှိတယ် (သို့) macril cream နဲ့တူအောင်သင်အကြံပြုလား။
ကျွန်မနှုတ်ခမ်းကိုဒဏ်ရာရစေပြီး MACRILE ရနိုင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏အရေခွံနှင့် ဦး ခေါင်းတွင်ယားယံခြင်း၊ ယားခြင်းများစွာရှိပြီးအနီရောင်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ုပ်အရေပြားတွင်အက်ကြောင်းများစတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
macril ကို herpes အတွက်သုံးလို့ရမလားသိချင်ပါတယ်
နှုတ်ခမ်းပေါ်ရှိရေယုန်ကိုဆန့်ကျင်ရန် macril ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ကံမကောင်းတာကရေယုန်အတွက် acyclovir than ထက်မကပါ
Alejandra Garcia placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
Macril သည် Balalanitis အတွက်အထူးဖြစ်သည်။ ၅ ရက် ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်၊ ပထမဆုံးwhiteရိယာကိုအဖြူရောင်ဆပ်ပြာနှင့်ရေပူဖြင့်ဆေးကြောပါ။ ထို့နောက် glans (pokito) တွင်သုံးပါ။ သင်လုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသော passience သည် passience ဖြစ်သော်လည်းဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြန်လုပ်ပါ။ ၁၅ ရက်ကြာသည်အထိလိပ်ခေါင်းရောဂါကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဤမုန့်သည်အသုံးမ ၀ င်ပါ။ ဤအတွက်အကောင်းဆုံးမှာဟီမိုရိုဇာ (အဝါရောင်ဘူး) ဖြစ်သည်။ အားလုံးအားနှုတ်ဆက်သည်
Alejandra Garcia သို့စာပြန်ပါ
မင်းရဲ့ tits အနည်းငယ်ကိုနင်သိလိမ့်မယ်။ ငါနင့်နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာကြွယ်ဝတဲ့ creampie ကိုချန်ပြီးပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝတယ်၊ အရေပြားအတွက်ကောင်းတယ်၊ သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှုန်း ၁၈၀ kcal ပဲရှိတယ်။ သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်ငါ့ကိုသိပါစေ
Sergio Paraguy ဟုသူကပြောသည်
hello amien ငါပြthisနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်၊ ဤသည်ကကျွန်ုပ်အားအနီရောင်ဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ သူတို့သည်မီးလောင်သကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်မျှမီးလောင်သကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲထိုည မှစတင်၍ ကျွန်ုပ်အားအကြံပေးသောသူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။
Sergio paraguy အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံတွင်အစက်အပြောက်များရှိနေပြီး၎င်းသည်မနေ့ကလောင်ကျွမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ဆက်ဆံမှုမှာသူသည်ရောဂါကူးစက်ခံထားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါကဗော်ဂိုလ်သုံးတဲ့မုန့်အတူတူသုံးလို့ရမယ်။ Macril
ငါသူတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာဆရာဝန်ဆီသွားသင့်တယ်ထင်တယ် .. ငါရေကန်ထဲမှာရောဂါကူးစက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်မရဲ့ရည်းစားကိုမှိုတွေနဲ့ကူးစက်ခဲ့ပြီးမီးယပ်အထူးကုက gincan ovules နဲ့ macril တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးငါ့ကောင်မလေးဟာ macril ကိုရခဲ့ပေမယ့်သူတို့မပျောက်ခဲ့ကြဘူး။ ဆရာဝန်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ကိုကောင်းမွန်စွာမကုသပါကဤအရာများသည်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ၊ ကျွန်ုပ်လိင်တံတွင်အစက်အပြောက်များရှိတယ်။ ပြီးတော့မနေ့ကငါရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်၊ သူမရောဂါကူးစက်ခံထားရပြီ။ ထိုအခါငါငါ float သောတူညီသော grema ကိုသုံးနိုင်သည်။ Macril
Juan Cruz ဟုသူကပြောသည်
ငါ balanitis ရှိသည်, pete ၏အထက်ပိုင်းခရမ်းရောင်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း, သူကနာကျင်သို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းသို့မဟုတ်ဘာမှမ, ငါအဖြစ်ကောင်းစွာအရေပြားကိုဆန့်နိုင်, သင်ဘာအကြံပြုသနည်း
Marcelo နှင့် ana ဟုသူကပြောသည်
ငါနဲ့ငါ့ရည်းစားက ၁၇ နှစ်ပဲ။ ငါတို့လိင်အင်္ဂါအပေါ်မှိုရှိတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၁ လကရလဒ်ကောင်းတစ်ခုထက်ပိုပြီးပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုသမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နံနက်ခင်းနှင့်ညအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကို macril ဖြင့်လိမ်းပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ရည်းစား၏ယောနိကိုထည့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ယူရပါသည်၊ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာသင်က၎င်းကိုတစ်ချိန်လုံးသောက်ရန်ဆင်ခြေပေးရုံသာမကဘဲမှိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေများပင်ရှိသည်။ မှိုဆင်ခြေနဲ့သူမမှာစအိုရှိပြီးသူလည်းသူမမှာစအိုရှိကြောင်းပြောပြတယ်။ အကယ်၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်၏အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်အားဆက်သွယ်ခြင်းကိုမရပ်ပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်ကုန်ကျစရိတ်မလိုဘဲကျွန်ုပ်၏ကုသမှုကိုခံယူလိုပါသည်။
marcelo and ana အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်မျက်နှာပေါ်၌အဖြူရောင်အစက်အပြောက်များတွေ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုဤသို့မမြင်လိုပါ။ ) - ဒီမုန့်ကကျွန်တော့်ကိုကုသပေးမလားသိလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်းနို့စို့လိုလူတွေဟာ !!! !!!
ငါ့မှာယားယံတာစအိုနဲ့ဒီ rectum ကိုသုံးတယ်။ ဒါကငါ့ကိုသိပ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။
ငါခြေထောက်လက်သည်းတွင်မှိုပါသောခရင်မ်နှင့်ပါတ်သက်သည့်မေးခွန်းတစ်ခုမှာသူတို့က kiten xk ကျွန်ုပ် ibada x ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ခြေချောင်းများတွင်မှိုရှိပြီးကျွန်ုပ်ကဒီမုန့်ဖြင့်သင်ငါ့ကိုသတ်နိုင်မယ်၊ အရာအားလုံးကိုငါကြိုးစားပြီးသင်ကူညီနိုင်ရင်ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်း၌နီခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏တည်ငြိမ်သောမိတ်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းပြီးနောက်ယားယံခြင်းများစွာရှိသည်။ MIconazole နိုက်ထရိတ် ၂% နှင့် Deralbine ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
ဟယ်လို။ ငါသည်ငါ့ poronga အတွက်မှိုတယ်။ ငါအရမ်းကြီးတယ်၊ ရပ်လိုက်ရင်တော်တော်နာတယ်။ marcril အမှုတော်ကိုထမ်းရွက် ?? ငါအဲဒါကို Vaseline အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား ??? ငါစအိုလိင်ကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူကအားယူခဲ့တယ်
Jorge Blanc ဟုသူကပြောသည်
jorge blanc အားပြန်ကြားပါ
Sebastian Ortiz ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏မုတ်ဆိတ်တွင်မှိုရှိပြီးကျွန်ုပ်ဆံပင်များလဲကျသော်လည်းကျွန်ုပ်အညစ်အကြေးအမျိုးအစားမရရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်များမှပြုတ်ကျသွားပြီးကျွန်ုပ်တွင်ဆံပင်မရှိသောနှင့်ချောကျိကျိ halo ရှိသောကြောင့်ထိုအဆီသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိမလားဆိုတာသိချင်ခဲ့သည်။
Sebastián Ortiz အားပြန်ကြားပါ
ဟယ်လို၊ ငါ macril ကိုသုံးလို့ရမလား၊ ငါ့လိင်တံကနီတယ်၊ တစ်နေ့ကိုအကြိမ်ရေတွက်တယ်
မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီခရင်မ်ကိုကုသရန်အသုံးပြုလျှင်ကလေးငယ်မှာလိင်တံအရေဖျားလှီးတဲ့အခါဒီကလတ်သည်အသုံးဝင်မှုရှိမရှိသိချင်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Macril toenail မှိုတွင် ၁၀၀% ထိရောက်မှုရှိမရှိသိရန်လိုအပ်သည်။ ဘာကိုကြိုးစားရမှန်းမသိတော့ဘူး !!!! မပျောက်နိုင်။
ငါမှာမှိုပါတဲ့လိင်တံရှိတယ်။ ငါကအများကြီးခြစ်ခြစ်လိုက်တာ။ ငါ macril cream ကသူကပြောတဲ့မှိုတွေအားလုံးပျောက်သွားမလားဆိုတာငါသိတယ်။
ငါမင်န်းတွေများတယ်၊ ငါမှာအနီရောင်ရှိပြီးယားယံခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်ရဲ့လိင်တံခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးငါ macril နဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ဆေးတွေကိုသုံးပါမယ်။ ငါရှာတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
မင်္ဂလာပါလူတွေ၊ ငါလည်းထပ်တူထပ်မျှပြhaveနာရှိနေတယ်။ ငါ့ကောင်မလေးကအမြဲတမ်းစအိုလိင်ကိုလိုချင်တယ်။ အနာမပျောက်မှီတိုင်အောင်ငါသံလွင်ဆီနှင့်အတူ (အပျော့ဖတ်) ရောနှောထားသော parsley ... doña porota ၏အိမ်ဆေးနှင့် voila ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ မှို ... သံသယကြောင့်ငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြဘူး။ ကံကောင်းတယ်…
၁၂ နာရီတိုင်း SPORASEC သို့မဟုတ် ALBISEC ဆေးတောင့်နှစ်တောင့်ကိုသောက်ပါ။ (နိုင်ငံများတွင်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်၊ ထိုအမည်နှင့်အတူဆေးဆိုင်တွင်သင်မသိပါက Secnidazole 12 mg + Itraconazole 166,66 mg) ။ ယင်းကိုသုံးရက် (33,33) ရက်လုပ်ရမည်။
ရေချိုးချိန်တွင် pH ကြားနေဆပ်ပြာကိုလုံးဝအသုံးပြုပါ။ ဒါကကလေးဆပ်ပြာပါ
BACTROMAX သို့မဟုတ် Rifamycin ဟုခေါ်သောရေမှုန်ရေမွှားကို 1% အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည် Rifamycin ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၂ နာရီလျှင်တစ်ကြိမ် (၅) ရက်အတွက်ပြုလုပ်ရမည်။
ရေမှုန်ရေမွှားအနည်းငယ်ခန့် ထား၍ ICADEN Cream (Isoconazole 1%) ကိုသုံးပါ။ ၎င်းကို ၁၂ နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သင့်သည်
ငါး (5) ရက်၏အာကာသ။
၅ ရက်ကြာပြီးနောက် BACTROMAX နှင့် ICADEN နှစ်ခုလုံးကိုဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီး၊
အနာရောဂါပျောက်ကင်းစေပြီး FITOSTIMOLINE (L) ဟုခေါ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂလန်းများအားခွန်အားပေးသော Super cream ။ သုံးနာရီ (သို့မဟုတ်) သင်လိုချင်သလောက် ၁၂ နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်။
ငါအက္ခရာများကိုဤသို့ပြုခဲ့ပြီးနောက်တစ်ပတ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်အဆင်ပြေသွားသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အပူများများပေးခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူကိုစုပ်ယူခြင်းဖြင့်စိုထိုင်းဆကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအရည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ) နှင့်အခြားအလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုမှာသကြား (သကြားလုံးသုည၊ သကြားဓာတ်သုည) လုံးဝကိုစွန့်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။
လိင်တံ၏ ဦး ခေါင်းတွင်သင်သည်ဤ macril မုန့်ကိုထည့်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကောင်းသောနေ့၊ ဘယ်နေရာမှာငါရနိုင်မလဲ။ ဆေးဆိုင်ရှိသည့်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ ... မက္ကလီးမုန့်ကအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ခြေထောက်မှိုပြaနာအတွက်ဆေးညွှန်းပေးပြီးမကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကိုပြန်လည်သက်သာစေခဲ့ပါတယ်။ အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခဲ့ပါတယ်။ မရောင်းပါနှင့်၊ နေရာတိုင်းတွင်ရှာဖွေ။ မတွေ့ပါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းတို့ကိုရရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင်တူညီသောဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဆင်တူသောထုတ်ကုန်မရှိပါ၊ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သည့်ဓာတ်ခွဲခန်းသည်ကျွန်ုပ်အားကူညီနိူင်ပါသည်။ ငါ့အီးမေးလ်က oguraboy2970@hotmail.es ငါမဆိုအကူအညီနဲ့တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။